Muxuu yahay qorshooyinka midabada xafiiska ganacsiga ugu wanaagsan? - Office Color Schemes
Home » Muxuu yahay qorshooyinka midabada xafiiska ganacsiga ugu wanaagsan?
Muxuu yahay qorshooyinka midabada xafiiska ganacsiga ugu wanaagsan?
Ultra violet: Ku dhawaaq ku samee midabka sanadka ee ‘Pantone’s The Year’ oo ah ‘violet’ aad u daran. Ka fikir hooska rabbaaniga ah ee guduudka ah, waa mid qallafsan, cajiib ah, oo qol kasta u keenaya dareen ah hubaal iyo muhiimad. Iyada oo aan loo eegin in booskaagu yahay mid aan hagaagsanayn ama quruxsan, hadhkani waa mid is bedbeddela oo ku habboon oo la tegi kara qorshe dejinta oo kasta oo loo adeegsan karo kala duwanaanshaha qodobbada xoogga leh.
Midabbada aadka u adag illaa hooska iftiinka gaaban, qaab-sannadeedka hadda jira wuxuu ka dhigi karaa xiriirkaaga inuu sii xirnaado iyadoo la hagaajinayo faa’iidada iyo kor u qaadista gobollada maskaxda! Deegaanada Xafiiska Ganacsiga, kuma biirin karno qayb kamida midabada cusub ee midabaynta wali waxaa sii dheer kuwa ku habboon muuqaalkaaga. Iyada oo aan loo eegin inaad u baahatid inaad wax ku kala firdhi on qeybiyeyaasha ama aad ku dartid korodhyo cajiib leh go’aankeenna ah qaab dhismeedka iyo daboollaha qeybiyeyaasha, waxaa muhiim ah inaad ka dhigto mid ka mid ah urur wanaagsan oo tusaalooyin ah, alaabo, iyo gaar ahaan, xaraashka.
Cagaarka waxaa loogu talagalay Balance – U isticmaal cagaar xafiiskaaga fikirrada xiirashada gaar ahaan meesha lacagtu ay marwalba isku beddeli doonto gacmaha mar kasta iyo mar labaad. Cagaaran wuxuu keenaa isleeg, deganaansho iyo qalbiqaboojin.